Maxkamadda Gobalka Banaadir oo xukuntay mas’uuliyiin musuq-maasuq lagu helay – Bandhiga
Maxkamadda Gobalka Banaadir oo xukuntay mas’uuliyiin musuq-maasuq lagu helay
Dacwad la xiriirta musuq maasuq oo loo heystay mas’uuliyiin ka tirsan Waaxda Canshuuraha ee dekada Muqdisho iyo Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa la soo gabagabeeyay.
Maxkamada Gobolka Banaadir oo kiiskan uu hor yiilay ayaa waxa ay xukun ku riday Maamulihii hore ee Furdada Xamar Axmed C/llaahi Samow iyo xubno kale oo la shaqeynayey oo gaaraya 8 Xubnood, kuwaa oo maxkamddu sheegto in lagu helay musuq-maasuq.
Maamulihii hore ee Furdada Xamar Axmed C/llaahi Samow iyo xubno kale oo la shaqeynayey ayaa mid kiiba waxaa lagu xukumay min Saddex sano oo Xabsi ah halka lasii daayay 2 kale oo ay ka mid tahay Haweeney ku xigeen ka aheyd waaxda Canshuuraha ee dekada Muqdisho sida uu sheegay Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir.
Dhinaca kale Waxaa Maxkamadu min Saddex Sano iyo Saddex biloo oo Xabsi ah ku riday agaasime waaxeedkii Wasaaradda gargaarka iyo Musiibooyinka Daahir Maamed Nuur iyo nin kale oo lagu magacaabo Mohamed Cumar.
Waa markii labaad oo xukun lagu rido mas’uuliyiin katirsan dowladda oo musuq maasuq lagu helay.